မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - Shenzhen Hengxing Packaging Machine Co. , ltd ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်စက်ရုံများ၊ စက်များအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် လုပ်၍ သင်လိုအပ်သည့်အတိုင်းစိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည်တရုတ်နိုင်ငံ၊ ရှန်ကျန်းတွင်တည်ရှိသည်။ ငါတို့ကိုလေကြောင်းနဲ့လာလည်ပတ်နိုင်တယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံမှ Shenzhen International Airport အထိ ၂၅ မိနစ်သာလိုသည်။ မင်းကိုသွားခေါ်ဖို့ငါတို့ကားတစ်စီးစီစဉ်ပေးနိုင်တယ်။
ကုန်ပစ္စည်းများကုန်ပစ္စည်းရှိနေလျှင်ယေဘုယျအားဖြင့် ၃-၅ ရက်ဖြစ်သည်။ သိုမဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းများသည်ပမာဏနှင့်သင်၏လိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ ကုန်ပစ္စည်းများသိုလှောင်ထားခြင်းမရှိပါက ၁၅-၄၅ ရက်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့နှစ်ဖက်စလုံးကသဘောတူညီခဲ့သည့်နေ့စွဲအဖြစ်အချိန်မီကယ်နှုတ်တော်မူမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်တပ်ဆင်ရန်ဗီဒီယိုများနှင့်သင်ခန်းစာများကိုပေးမည်။ သို့မဟုတ်ပါကစက်များမည်သို့လည်ပတ်ရမည်ကိုသင်ကြားပေးရန်စက်သည်အသင့်ဖြစ်သည့် ASAS သည်သင်၏ site တွင်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုကိုစီစဉ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်လိုအပ်ပါကသင်၏ကျွမ်းကျင်သူများကိုသင်ကြားရန်နှင့်လေ့ကျင့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အင်ဂျင်နီယာကိုသင်၏ဘက်သို့လည်းစေလွှတ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုမဖြန့်ဝေမီဂရုတစိုက်စစ်ဆေးပြီးသေချာစေမည်ဖြစ်ပြီးထုတ်ကုန်များအသုံးပြုရန်အတွက်မှန်ကန်သောညွှန်ကြားချက်များနှင့်ဗီဒီယိုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ထုတ်ကုန်များအသုံးပြုစဉ်အတွင်းမေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများနှင့်တိုင်ပင်ပါ။
သင့်ထံမှ ၀ ယ်ယူလျှင်အာမခံချက်ကဘာလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့ထံမှာယူထားသောစက်များအားလုံးသည်ပို့ဆောင်သည့် နေ့မှစ၍ တစ်နှစ်အာမခံချက်ပေးလိမ့်မည်။ အကယ်၍ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများရှိပါကအာမခံအတွင်းကျိုးပဲ့ပြီးမလျော်ကန်သောလည်ပတ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အသစ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုအခမဲ့ကမ်းလှမ်းပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ယေဘုယျအားဖြင့် T / T သို့မဟုတ် L / C ကိုအသုံးပြုပြီးငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုညှိနှိုင်းနိုင်သည်။
၃။ အကယ်၍ သင့်တွင်မေးမြန်းစရာများရှိပါက PLS မှကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ၊ သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ပို့ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်ဖြေကြားမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ကတိပေးပါသည်။
၁။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးသားဖြောင့်မှန်စွာကတိပေးပါကသင်၏ ၀ ယ်ယူမှုအတိုင်ပင်ခံအဖြစ်သင့်အား ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းသာပါသည်။
၁။ အာမခံသက်တမ်းနှင့်တစ်သက်တာထိန်းသိမ်းမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုမည်သည့်နေရာတွင် ၀ ယ်ယူရမည်နည်း။
၂။ ၂၄ နာရီတယ်လီဖုန်းဝန်ဆောင်မှု။
3. အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများတစ် ဦး ကကြီးမားတဲ့စတော့ရှယ်ယာ, အလွယ်တကူ - ဝတ်ဆင်အစိတ်အပိုင်းများ။
4. အင်ဂျင်နီယာတစ် ဦး မှတစ်အိမ်မှ ၀ န်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။